ဓမ္မစက္ကပ္ပ၀တ္တသုတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ဓမ္မစက္ကပ္ပ၀တ္တသုတ်
Posted by သားငယ် on Jan 4, 2012 in Other - Non Channelized |2comments
သစ္စာလေးပါးကို ပြတော်မှုတတ်သော လူတို့ ၏ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်တော်မှုသော မြတ်စွာဘုရားသည် သဟမ္ပတိ အမည်ရှိသော မဟာဗြဟ္မာမင်း ကတောင်းပန်အပ်သည် ဖြစ်၍ ဘုရား,ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ, အရိယာတို့ကောင်းကင်မှ သက်ဆင်းရာ ကောင်းကင်သို့ တတ်ရောက်ရာဖြစ်၍ ” က္ကသိပတန”အမည်ရှိသော သားမျိုးစုံ တို့ အား ဘေးမဲ့ပေးရာ မိဂဒါဝုန်တော`၌ ငါးယောက်အစု ရှိခြင်းကြောင့်ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ အမည်ရှိသော ကောဏ္ဍည, ၀ပ္ပ, ဘဒ္ဒိယ, မဟာနာမ်, အဿဇိ ရဟန်းတို့ အား နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေတတ်သော မြတ်သော တရားဖြစ်သော အကြင်စမ္မစကြာဒေဿနာတော်ကို
ခပ်သိမ်းကုန်သော သမ္မုတိနတ်, ဥပပတ္တိနတ်, ၀ိသုဒ္ဓိနတ် တို့ သည် နှစ်သက်အပ်သော လောကီ လောကုတ္တရာ ပစ္စုပ္ပန်သံသရာ စည်းစိမ်အားလုံးကို ပြီးစေတတ်သော
ထိုဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကို ခပ်သိမ်းသောလောကီ၏ အစီးအပွားအကျိုးငှာ အိုသူတော်ကောင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့ ရွတ်ဖတ်ကြပါကုန်စို့ ။
အရှင်မဟာကဿပ,ဤဓမ္မစက္ကပ္ပ၀တ္တနသုတ်ကို အကျွနုပ်အာနန္ဒာမထေရ်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ မျက်မှောက်တော်မှ ဤသို့ ကြားလိုက်ရပါ၏။အခါတစ်ပါး မြတ်စွာဘုရားသည်
ဗာရာဏသီပြည် က္ကသိပတနအမည်ရှိသော မိဂဒါဝုန်တော`၌ နေတော်မှု၏ ။ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသခင်က ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ ကို မိန့် တော်မှု၏။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်း တို့ ရဟန်းဖြစ်သော သူသည် ဤအယုတ်တရား (အစွန်း)နှစ်ပါးတို့ ကို မမှီဝဲအပ်ကုန်။
(၁) ယုတ်ညံ့သော၊ ရွာသူတို့ ၏ ဥစ္စာဖြစ်သော ၊ ပုထုဇဉ် တို့ ၏ အလေ့အကျင့်ဖြစ်သော ၊အရိယာတို့ ၏ ဥစ္စာမဟုတ်သော စီးပွားချမ်းသာဖြစ်ကြောင်းနှင့် မစပ်သော၊တေဘူမက
တရားတည်းဟူသော ၀တ္တုကာမတို့ `၌ ဆန္ဒ ရာဂတည်းဟူသော ကိလေသာကာမနှင့်စပ် ယှဉ်သော၊ ချမ်းသာကိုအဖန်တလဲလဲ ခံစားခြင်းဟု ဆိုအပ်သော အယုတ်တရားအစွန်းတစ်ပါး။
(၂) ဆူးငြောင့်ကိုမှီ၍ အိပ်ခြင်း စသည်ဖြင့်ဆင်းရဲကို ဆောင်တတ်သော ၊အရိယာတို့ ၏ ဥစ္စာမဟုတ်သော ၊တတ္ထိတို့ ၏ ဥစ္စာဖြစ်သော၊ စီးပွားချမ်းသာဖြစ်ကြောင့်နှင့် မစပ်သော၊
မိမိကိုယ်၏ ပင်ပန်းခြင်းကို အဖန်တလဲလဲဖြစ်စေတတ်သော အယုတ်တရား အစွန်းတစ်ပါး။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ ၊ ထိုအယုတ်တရားအစွန်းနှစ်ပါးတို့ ကို မကပ်ရောက်မှု ၍ငါဘုရားသည် ထိုးထွင်း၍သိတော်မှုအပ်သော၊ သစ္စာလေးပါးကိုမြင်တော်မှုတတ်သော၊ ပညာမျက်စိကို ပြုတတ်
သောသစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းကိုပြုတတ်သော (ကာမသုခလ္လိကုနု-ယောဂ သဿတဒိဋ္ဌိဟူသော တစ်ခုသောအစွန်း၏ )အလယ်`၌ဖြစ်သော၊ ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ခြင်းကို အလိုရှိသောသူတို့့သည် ကျင့်အပ်သော ၊အကျင့်သည် ကိလေသာငြိမ်းခြင်းတည်း ဟူသော သဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန် အကျိုးငှာ၊ သစ္စာလေးပါးကို ထူးသော ဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှာ၊ သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာ သိခြင်းငှာ၊
အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာ ဖြစ်၏။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ ၊ ငါဘုရားသည် ထိုးထွင်း၍ သိတော်မှုအပ်သော သစ္စာလေးပါးကို မြင်တတ်သော ပညာမျက်စိကို ပြုတတ်သော သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းကိုပြုတတ်သော အကြင်
အလယ်အလတ် ဖြစ်သော အကျင့်သည် ကိလေသာငြိမ်းခြင်း တည်းဟူသော သဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန် အကျိုးငှာ သစ္စာလေးပါးကိုထူးသောဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှာ သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာ သိခြင်းငှာ
အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာ ဖြစ်၏။ ထိုအလယ်အလတ်ဖြစ်သော အကျင့်သည် အဘယ်နည်း?
မြတ်သော အင်္ဂါ ရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော ဤမဂ်ပင်တည်း။
၁။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ = ကောင်းစွာ မြင်ခြင်း။
၂။ သမ္မာသင်္ကပ္ပ = ကောင်းစွာ ကြံခြင်း။
၃။ သမ္မာဝါစာ = ကောင်းစွာ ဆိုခြင်း။
၄။ သမ္မာကမ္မန္တ= ကောင်စွာ ပြုခြင်း။
၅။ သမ္မာအာဇီဝ = ကောင်းစွာ အသက်မွေးခြင်း။
၆။ သမ္မာဝါယာမ = ကောင်းစွာ အားထုတ်ခြင်း။
၇။ သမ္မသတိ = ကောင်းစွာ အောက်မေ့ခြင်း။
၈။ သမ္မသမာဓိ = ကောင်းစွာ တည်ကြည်ခြင်း။
ဤရှစ်ပါးသော သဘောတရားသည် မဂ္ဂင်မည်၏။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ ၊ ငါဘုရားသည် ထိုးထွင်း၍သိအပ်သော၊ သစ္စာလေးပါးကို မြင်တတ်သော ပညာမျက်စိကို ပြုတတ်သော သစ္စာလေးပါး သိခြင်းကို ပြုတတ်သော ဤမဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တည်းဟူ
သောအလယ်အလတ် ဖြစ်သော အကျင့်သည် ကိလေသာ ငြိမ်းခြင်းတည်းဟူသော သဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာ သစ္စာလေးပါးကို ထူးသောဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှာ သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာ
သိခြင်းငှာ အနုပါဒိသေသ နီဗ္ဗာန်အကျိုးငှာ ဖြစ်၏။
ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
ဆိုးရွားဟောင်းမြင်း အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
ဖျားနာရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
သေရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
မချစ်မနှစ်လိုအပ်သော သတ္တ၀ါသင်္ခါရတို့ နှင့် အတူ တကွပါင်းယှဉ်ရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
ချစ်နှစ်လိုအပ်သော သတ္တ၀ါ သင်္ခါရတို့ နှင့် ကွေကွင်းကင်းကွာ ရှဲခွာဖဲကျဉ်မပေါင်းရခြင်း သည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်း စသော သဘောတရား ငါ့အား မဖြစ်ပါမှုကောင်းလေစွ စသည်ဖြင့် တောင့်တတိုင်းမရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
အကျဉ်းအားဖြင့် ဥပါဒါန်၏အာရုံဖြစ်သော ခန္ဓာ ငါးပါးတို့ သည် ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။
ဤဇာတိ စသောတရားသည် ဒုက္ခဖြစ်သော အရိယာတို့ သည် သိအပ်သော သစ္စာမည်၏။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့တဏှာလောဘသည် တစ်ဖန်ဘ၀သစ် ကိုဖြစ်စေတတ်၏ နှစ်သက်ခြင်း တပ်မက်ခြင်း နှင့်တကွဖြစ်၏ ။ ထိုထို ဘ၀ အာရုံ`၌အလွန်နှစ်သက်တက်၏ ။တဏှာဟူသည်မှာ
၁။ ကာမတဏှာ = ရူပါရုံစသော ၀တ္ထုကာမကို တပ်မက်သော တဏှာ ။
၂။ ဘ၀တဏှာ = သဿတဒိဋ္ဌိနှင့် တကွဖြစ်သောတဏှာ ။
၃။ ၀ိဘ၀တဏှာ = ဥစ္ဆေဒ ဒိ ဋ္ဌိနှင့်တကွဖြစ်သော တဏှာ။
ဤတဏှာ တည်းဟူသော သဘောတရားသည် ဒုက္ခ၏ အကြောင်း ဖြစ်သော အရိယာ တို့ သည် သိအပ်သော သစ္စာမည်၏ ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့တဏှာ လောဘ၏အကြွင်းမဲ့ တပ်ခြင်း ကင်းရာ ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည် ရှိ၏။ စွန့် ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သည် ရှိ၏ ။ဝေးစွာ စွန့် ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သည်ရှိ၏ ။
လွတ်ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သည်ရှိ၏ ။ ကပ်ငြိခြင်းကင်းရာ ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန် သည်ရှိ၏ ။ဤနိဗ္ဗာန် ဟူသောသဘောတရားသည် ဒုက္ခ ၏ ချုပ်ရာဖြစ်သော အရိယာတို့ သည်သိအပ်သော သစ္စာမည်၏ ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ မြတ်သောဤမဂ်သည်ပင်လျှင် အင်္ဂါရှစ်ပါး နှင့်ပြည့်စုံ၏ ဤမဂ္ဂင်သည်လျှင် ဒုက္ခ၏ ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်သော အရိယာတို့ သည် သိအပ်သောသစ္စာမည်၏ ။
ဒုက္ခသစ္စာ `၌ သစ္စဥာဏ်
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့တဏှာကြဉ်သော ဤတေဘူမက တရားသည်ဒုက္ခဖြစ်သောအရိယသစ္စာမည်၏။
ဤသို့ ငါသည် ဘုရားမဖြစ်မှီရှေးက မကြားဖူးကုန်သော သစ္စာတရားတို့ `၌ ဒုက္ခသစ္စာ
ကိုမြင်တတ်သော ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ဒုက္ခသစ္စာ ကိုသိခြင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ဒုက္ခသစ္စာကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ ဒုက္ခသစ္စာကို ဖုံးလွမ်းတတ်သောမောဟတည်းဟူသော
အမိုက်တိုက်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ပညာ အရောင်အလင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထိုဒုက္ခဖြစ်သော အရိယသစ္စာကို (ဤတရားကား ဒုက္ခတည်း ဤဒုက္ခကား ဤမျှသာတည်း ဤထက်ပိုအလွန် ဤမှအောက်အယုတ် မရှိဟု ) ထက်ဝန်းကျင်မှ ပိုင်းခြား၍
သိအပ်၏။ ဤသို့ ငါသည် ဘုရားမဖြစ်မှီ ရှေးက……….
` ဒုက္ခသစ္စာ`၌ ကတဥာဏ်
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထိုဒုက္ခဖြစ်သော အရိယသစ္စကို (ဤတရားကား ဒုက္ခတည်း ဤဒုက္ခကား ဤမျှသာတည်း ဤထက်အလွန် ဤမှအောက်အယုတ်မရှိဟု ) ထက်ဝန်းကျင်မှ ပိုင်းခြား၍
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ဤတဏှာဟူသော လောဘသည် ဒုက္ခ၏ အကြောင်းဖြစ်သော အရိယသစ္စာမည်၏ ။ ဤသို့ ငါသည်ဘုရားမဖြစ်မှီ ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော သစ္စာတရားတို့ `၌
သမုဒယသစ္စာကို မြင်တတ်သော ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှား ဖြစ်၏ ။ သမုဒယသစ္စာကို သိခြင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။( တရားကိုယ်အားဖြင့် တစ်ပါး အခြင်းအရာအားဖြင့် ကာမတဏှာ, ဘ၀တဏှာ,
၀ိဘ၀တဏှာ ဟူ၍ သုံးပါး ရူပတဏှာ ,သဒ္ဒတဏှာ ,ဂန္ဓတဏှာ ,ရသတဏှာ ,ဖောဋ္ဌဗ္ဗတဏှာ ,ဓမ္မတဏှာ ဟူ၍ အာရုံအားဖြင့် တစ်ဆယ့်ရှစ်ပါး အဇ္ဇုတ္တ , ဗဟိဒ္ဓ သန္တာန် အားဖြင့် သုံးဆယ့်ခြောက်ပါး
၊အတိတ် , အနာဂါတ် ,ပစ္စုပ္ပန်ကာလ အားဖြင့် တစ်ရာ့ ရှစ်ပါးရှိ၏ဟု) အပြားအားဖြင့် သိခြင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏။ သမုဒယသစ္စာ ကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ သမုဒယသစ္စာကို
ဖုံးလွမ်းတတ်သော မောဟ တည်းဟူသော အမိုက်တိုက်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ပညာ အရောင်အလင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထိုဒုက္ခ၏ အကြောင်းဖြစ်သော အရိယ သစ္စာကိုပယ်အပ်၏ (ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာ ကိုသောတာပတ္တိမဂ် ဖြင့်ပယ် အပ်၏။ ကာမရာဂ ကိုအနာဂါမိမဂ်ဖြင့် ပယ်အပ်၏ ။ ရူပရာဂ
အရူပရာဂ ကို အရဟတ္တမဂ်ဖြင့်ပယ်အပ်၏ ။) ဤသို့ ငါသည်ဘုရားမဖြစ်မီရှေးက…………………
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထိုဒုက္ခ၏အကြောင်း ဖြစ်သော အရိယ သစ္စာကို မဂ်လေးပါးဖြင့် အကြွင်းမဲ့ ပယ်အပ်ပြီး ဤသို့ ငါသည် ဘုရားမဖြစ်မီရှေးက………
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ဤနိဗ္ဗာန် သည် ဒုက္ခ ၏ချုပ်ရာဖြစ်သော အရိယသစ္စာမည်၏ ။ ဤသို့ ငါသည် ဘုရားမဖြစ်မီ ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော သစ္စာတရားတို့ `၌ နိရောဓသစ္စာကို မြင်တတ်
သော ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏။ (တရားကိုယ်အားဖြင့် တစ်ပါး ၊ သဥပါဒိသေသ အနုပါဒိသေသ အားဖြင့်နှစ်ပါး၊ သုညတ , အနိမိတ္တ, အပ္ပဏီဟိတ အားဖြင့် သုံးပါးရှီ၏ ဟု) အပြားအားဖြင့်
သိခြင်းသည်ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ နိရောဓသစ္စာကို ထိုးထွင်း ၍ သိခြင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ နိရောဓသစ္စာကို ဖုန်းလွမ်းတတ်သော မောဟတည်းဟူသောအမိုက် တိုက်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ပညာ
အရောင်အလင်းသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထိုဒုက္ခ၏ ချုပ်ရာဖြစ်သော အရိယသစ္စာကို မဂ်ဥဏ် ဖိုလ်ဥာဏ် ပစ္စဝေက္ခဏာ ဥာဏ် တို့ ဖြင့် မျက်မှောက်ပြုအပ်ပြီ ။ ဤသို့ ငါသည်ဘုရားမဖြစ်မီရှေးက……..
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ဤမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးသည် ဒုက္ခ၏ ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်သော အရိယသစ္စာမည်၏ ။ ဤသို့ ငါသည် ဘုရားမဖြစ်မီ ရှေးက မကြားဖူးကုန်သော သစ္စာ
တရားတို့ `၌ မဂ္ဂသစ္စာကို မြင်တတ်သော ပညာမျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ မဂ္ဂသစ္စာကို သိတတ်သော ဥာဏ်သည်ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ စသည်ကို အပြားအားဖြင့် သိခြင်းသည်ထင်ရှားဖြစ်၏။
မဂ္ဂသစ္စာ ကိုဖုံးလွမ်းတတ်သော မောဟတည်းဟူသော အမိုက်တိုက်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ပညာအလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။
မဂ္ဂသစ္စာ `၌ ကိစ္စဥာဏ်
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထိုဒုက္ခ ၏ ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သော အရိယသစ္စာကို ပွားစေအပ်ပြီ ။ ဤသို့ ငါသည် ဘုရားမဖြစ်မီရှေးက……
ရှေးကဘု၇ားဖြစ်ကြောင်း ၀န်မခံခဲ့ ပုံ
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့အကြင်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ဤသစ္စာလေးပါးတို့ `၌ ဤသို့ ကိစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် အားဖြင့် သုံးပါးသော အပြန်ရှိသော သုံးပါးလေးလီဖြစ်၍ တစ်ဆယ့်နှစ်ပါး
သောအခြင်းအရာရှိသော ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်သော ဥာဏ်အမြင်သည် ငါ့အားအလွန်သန့် ရှင်းစင်ကြယ်မှု့ မဖြစ်သေး။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထို ဥာဏ်အမြင် မစင်ကြယ်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ငါဘုရားသည် ကာမာဝစရ နတ်ပြည်ငါးထပ်နှင့် တကွ မာရ်မင်း၏ တည်ရာ ၀သ၀တ္တီနတ်ပြည်နှင့်တကွ ဗြဟ္မာ့ပြည် နှင့်တကွသော သြကာသ လောကအတွင်း ရဟန်း ပုဏ္ဏားနှင့်တကွ သမုတိနတ် တည်းဟူသော မင်းကြွင်းသော လူနှင့်တကွသော သတ္တလောက`၌အတုမရှိသော အရဟတ္တမဂ်ဥာဏ်သဗ္ဗညုတဥာဏ် ကိုထိုးထွင်း၍ သိပြီဟု ၀န်ခံတော်မမှုသေး ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့အကြင်အခါ`၌ကားဤသစ္စာလေးပါးတို့ `၌ဤသို့ သစ္စဥာဏ် ကိစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် အားဖြင့် သုံးပါးသော အပြန်ရှိသော သုံးပါးလေးလီဖြစ်၍ တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးသောအခြင်းအရာရှိသော ဟုတ်တိုင်းမှန်တိုင်းဖြစ်သော ဥာဏ်အမြင်သည် ငါ့အားအလွန်သန့် ရှင်းစင်ကြယ်၏ ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ထိုဥာဏ်အမြင် စင်ကြယ်စွာဖြစ်သော အခါ`၌ငါဘုရားသည် ကာမာဝစရ နတ်ပြည်ငါးထပ်နှင့် တကွ မာရ်မင်း၏ တည်ရာ ၀သ၀တ္တီနတ်ပြည်နှင့်တကွ ဗြဟ္မာ့ ပြည် နှင့်တကွသော သြကာသ လောကအတွင်း ရဟန်း ပုဏ္ဏားနှင့်တကွ သမုတိနတ် တည်းဟူသော မင်းကြွင်းသော လူနှင့်တကွသော သတ္တလောက`၌အတုမရှိသော အရဟတ္တမဂ်ဥာဏ်သဗ္ဗညုတဥာဏ် ကိုထိုးထွင်း၍ သိပြီဟုဝန်ခံတော်မှုပြီ ။
ငါ့အားပစ္စဝေက္ခဏာဥာဏ် အမြင်သည် ထင်ရှားဖြစ်လေပြီ ။ငါ၏ အရဟတ္တဖိုလ်ဥာဏ်ကို ဆန့် ကျင်ဘက်လားရာတို့ က မဖျက်ဆီးနိုင်ပြီ ။ ဤဘ၀သည် အဆုံးစွန်သော ဘ၀တည်း။ ဤယခု ပစ္စဝေက္ခဏာဥာဏ် အမြင်သည်ထင်ရှားဖြစ်ပြီ ။
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့တရားကိုနှစ်သက်ကြပုံ
ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့ က နှစ်လိုဝမ်းမြောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသော တရားတော်ကိုရိုသေစွာဦးဖြင့် ခံယူကုန်၏ ။
ဂါထာမဖတ် စုဏ္ဏိယ သက်သက်ဖြစ်သော ဤတရားတော်ကို ဟောကြားတော်မှုသည်ရှိသော် အရှင်ကောဏ္ဍညထေရ်အား အပ္ပါယ်သို့ လားစေတတ်သော ရာဂအစရှိသောမြုမှကင်းသော
အကြွင်းမရှိ ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာ ကိုပယ်သဖြင့်အညစ်အကြေးကင်းသော သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကို
မြင်တတ်သော သောတာပတ္တိမဂ်ဥာဏ် တည်းဟူသော မျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်၏ ။ အလုံးစုံသော
တေဘူမကတရားသည် ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိ၏ ။ ထိုဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော တရားဟူသမျှ ချုပ်ခြင်းသဘောရှိ၏ ဤသို့ ထင်ရှားဖြစ်၏ ။
မြတ်စွာဘုရားသည် စမ္မစကြာတရားတော် ကိုဟောတော်မှုအပ်သည်ရှိသော် ဘုမ္မစိုးနတ်တို့ သည် ကောင်းချီးပေးသောအသံကို တပြိုင်နက်ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီပြည် က္ကသိပတန မိဂဒါဝုန်တော်ဝယ် ရဟန်းလောက,ဗြဟ္မာလောက တစ်စုံတစ်ယောက်မျှမတားဖြစ်နိုင် မဟောနိုင်သော အတုမရှိသော ဓမ္မစကြာတရားတော်ကို
ဟောတ်ာမှုအပ်ပြီ ။ဤသို့ ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
ဘုမ္မစိုးနတ်တို့ ၏ ကောင်းချီးပေးသံကိုကြားကုန် ၍စတုမဟာရာဇ် နတ်တို့ ကလည်း ကောင်းချီးပေးသော အသံကိုအဆင့်ဆင့်ကြွေးကြော်ကြကုန် ၏ ။
စတုမဟာရာဇ်နတ် တို့ ၏ကောင်းချီးပေးသံကိုကြားကုန်၍တာဝတိံသာ နတ်တို့ ကလည်း ကောင်းချီးပေးသော အသံကို အဆင့်ဆင့် ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
တာဝတိံသာနတ်တို့ ၏ကောင်းချီးပေးသံကို ကြားကုန်၍ ယာမာနတ်တို့ ကလည်း ကောင်းချီးပေးသောအသံကို အဆင့်ဆင့်ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
ယာမာနတ်တို့ ၏ ကောင်းချီးပေးသံကိုကြားကုန်၍ တုသိတာနတ်တို့ ကလည်း ကောင်းချီးပေးသောအသံကိုအဆင့်ဆင့်ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
တုသိတာနတ်တို့ ၏ ကောင်းချီးပေးသံကိုကြားကုန်၍ နိမ္မာနရတိနတ်တို့ ကလည်း ကောင်းချီးပေးသောအသံကိုအဆင့်ဆင့်ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
နိမ္မာနရတိ နတ်တို့ ၏ကောင်းချီးပေးသံကိုကြားကုန်၍ပရနိမ္မိတ၀သ၀တ္တီနတ်တို့ ကလည်း ကောင်းချီးပေးသောအသံကိုအဆင့်ဆင့်ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
ပရနိမ္မိတ၀သ၀တ္တီ နတ်တို့ ၏ကောင်းချီးပေးသံကိုကြားကုန်၍ ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့ ကလည်း ကောင်းချီးပေးသောအသံကိုအဆင့်ဆင့်ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ ။
ထိုခဏထိုလယ ထိုမဟုတ်ဖြင့် အထက်ကနိဋ္ဌဗြဟ္မာ့ပြည်တိုင်အောင် ကျော်စောသောအသံသည်ပျံနှံ၍တက်၏ ။
ဤတစ်သောင်းသော စကြ၀ဋ္ဌာလောကဓာတ်သည်လည်းသက်၍လှုပ်၏ ။တက်၍ လှုပ်၏ ။ထိုမှ ဤမှဧယာဉ်ကဲ့သို့ လှုပ်၏ ။
အတိုင်းအရှည်မရှိသော ပြန့် ပြောသော ဒေသနာဥာဏ် ကြောင့်ဖြစ်သော အရောင်အလင်းသည်လည်း လောက`၌နတ်ဗြဟ္မာတို့ ၏ အာနုဘော်ကိုသာလွန်၍ ထင်ရှားဖြစ်၏ ။
ထိုအခါ`၌မြတ်စွာဘုရားက ၀မ်းမြောက်သော စကားကိုတစ်သောင်းတိုက်သား ကြားသိအောင် မြွတ်ဆိုတော်မှု၏ ။ အို ရဟန်းတို့ကောဏ္ဍည သည်စင်စစ် သစ္စာလေးပါးကိုသိလေပြီ ။
ကောဏ္ဍညသည် စင်စစ် သစ္စာလေးပါးကိုသိလေပြီ ဤသို့ မြွတ်ဆိုတော်မှု၏ ။
ဤသို့ ဥဒါန်းကျုးတော်မှုသော ကြောင့်သာလျှင် အရှင် ကောဏ္ဍညအား အညာသိကောဏ္ဍည ဟူ၍သာလျှင်အမည်တွင်လေ၏ ။
ထိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသောအခါ`၌ အရှင်ညာသိကောဏ္ဍညသည် မြင်အပ်ပြီးသော သစ္စာတရားရှိသည်ဖြစ်၍ ရောက်အပ်ပြီးသော သစ္စာတရားရှိသည်ဖြစ်၍ သိအပ်ပြိးသောသစ္စာတရား
ရှိသည်ဖြစ်၍ ဥာဏ်ဖြင့် သက်ဝင်အပ်ပြီးသော သစ္စာတရားရှိသည်ဖြစ်၍ ကူးမြောက်ပြီးသော တစ်ဆယ့်ခြောက်ပါးသော ယုံမှားခြင်း ရှစ်ပါးသော ယုံမှားခြင်း ကင်းသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်
သိမြင်အပ်သောကြောင့်သူတစ်ပါးတို့ အား ယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်မှု၍ မြတ်စွာဘုရားကိုဤသို့ သောစကားကိုလျှောက်၏ ။
မြတ်စွာဘုရား အကျွနှုပ်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ အထံ`၌ ရှင်အဖြစ်ကိုရချင်ပါ၏ ရဟန်းအဖြစ်ကိုရချင်ပါ၏ ဤသို့ လျှောက်၏ ။
ရဟန်းလာလော့ တရားတော်ကို ကောင်းစွာငါဟောအပ်ပြီ..၀ဋ်ဆင်းရဲ၏အဆုံးကိုပြုခြင်းငှာ အထက်မဂ်သုံးပါးတည်းဟူသော မြတ်သောအကျင့်ကိုကောင်းစွာကျင့်သုံးလော့ ဤသို့ 
မြတ်စွာဘုရားက မိန့် တော်မူ၏ ။ အရှင်အညာသိကောဏ္ဍညအား ထိုဧဟိဘိက္ခု ပဉ္စင်း အဖြစ်သည်သာလျှင် ရဟန်းခံခြင်း ရဟန်းပြုခြင်းကိစ္စ ပြီးမြောက်လေ၏ ။
ဖတ်ရတာ အားကျဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ ဘုရားရဲ့ တရားဦးကို နာကြားရသလို ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ခုလိုတင်ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဘုရားဟာ အနတ္တလက္ခဏသုတ်ကိုကျ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးလုံး သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှ ဟောတယ်နော်။ အဲဒါဘာလို့လဲသိချင်ပါသေးတယ်။ အနတ္တလက္ခဏသုတ်လာ သဘောတွေကို သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှသာ သဘောပေါက်နိုင်တာမို့လို့များလားလို့ အဖြေထုတ်ကြည့် နေမိလို့။ အကယ်လို့များ အဆင်သင့်ရင် အဲဒါလေးပါ တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ခုလို တန်ဖိုးရှိတဲ့စာ တွေဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
သားငယ်ကို ပြောလိုပါတယ်။ သစ္စာလေးပါးမှာ ဒုက္ခသစ္စာလား၊ ဒုက္ခအရိယသစ္စာလား သေချာ ရေးသားလိုပါတယ်။ copy, paste လုပ်ရင်လည်း မူရင်း ပါဠိမြန်မာပြန်ကို သေချာလေ့လာသင့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်က ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်တွေထဲမှာလည်း ဖြတ်ညှပ်ကပ်တွေလုပ်ပြီး ထပ်တိုး ပါဠိတော်တွေ ၀င်ရောက်နေတယ်လို့ ဆရာတော်တစ်ပါး မိန့်ကြားဖူးပါတယ်။